Zimbabwe: Khama - Nothing Except Country Name and Leaders Has Changed in Zim in 40 Years - allAfrica.com
Zimbabwe: Khama - Nothing Except Country Name and Leaders Has Changed in Zim in 40 Years
Outspoken former Botswana President Ian Khama has made a scathing valuation of the Zanu PF led regime's performance through claims nothing, except for name and leaders, has changed in Zimbabwe since independence.
Said the ex-leader, "Abductions, incarceration of journalists, politicians from other people, royals and many people and still many Zimbabweans moving out of the country as a result, all this clearly indicates that today, 40 years since independence, the only thing that has changed in Zimbabwe is the name of the country and that of its leaders.
"In plain English, there is a crisis in Zimbabwe, not just challenges with extreme difficulties all man-made and growing in intensity and long lasting.
"That is why Zanu PF officials use the word crisis almost 14 times at one stage more than any other in that briefing."
Said Khama, "A leader has one responsibility and one only, and that is to mobilise, motivate programmes and policies in the best interests of citizens not in their self-interest. People's lives matter, Zimbabweans lives matter."
However, President Emmerson Mnangagwa's administration has been adamant there was no crisis in the country, insisting the world was merely reacting to false social media claims of abuses and poor leadership in Zimbabwe.
Recently, Zimbabwe's Deputy Defence Minister, Victor Matemadanda launched an attack on Khama, telling the bachelor ex-leader to direct his efforts towards finding himself a wife and stop meddling in the country's affairs.